Iingcebiso zokuHlola zeRHCSA - Indlela yokuPhononongwa kweRHCSA? - ITS Tech School
Iingcebiso zovavanyo lweRHCSA
I-RHCSA kukuvavanya ulwazi lwe-Red Hat Enterprise Linux kwinkqubo kunye neendlela zokuziphatha apho izithemba zizame kwiinkqubo zentlangano yenkqubo. Emva kokuba ufumane isatifikethi, uya kukwazi ukusebenzela kwiimeko zeRebat Enterprise Linux. Phambili kwaye ufumane iingcebiso ezimbalwa eza kukunceda kwi-RHCSA yoVavanyo lweZatifikethi.
I-RHCSA: I-Red Hat yoMlawuli weNkqubo eqinisekisiweyo
Iingcebiso ezandul 'ukugqibela kwi-RHCSA Exam
Hlaziya ngokungafihli nto: Ukuze udlulise nayiphi na imvavanyo, uqeqesho aluphepheki. Njalo imeko yeRHCSA. Ekubeni lo luhlolo lwezandla, awukwazi ukufunda iimbono ngentliziyo. Sitshintsha i-PC yakho ngoku kwaye uqale usebenze ngezabelo nakweyiphi na imeko, ngokulandela ukusetyenziswa kwemiyalelo. Kubalulekile ukuba uqaphele into oyifunayo ngokwenene.
Ulawulo lwexesha: Olu vavanyo luyaphinda lusetyenwe kwaye unokuba unganelanga ixesha elifutshane. Yibhalwe kumsebenzi wakho kwaye uzame ukugqiba izabelo ezinqwenelekayo zokuqala ngenjongo yokuba ukwandise ukuqinisekiswa okuqinisekileyo. Unokuya ngoko uziva unengxaki. Gcina ukhumbule ukuba ukuzama ukuqala ukutshatyalalisa itoni yexesha lakho ngale ndlela kukukhathaza.
Ukuthobela iithagethi: Ukuba ungumlawuli ophumeleleyo, unokufumana isahlulo seendawo ezilula. Yiba nokuba kunjalo, ngokubhekiselele kwizinto ezinzima, ulahlekelwa yithemba. Gcina ukhumbule uvavanyo lwenani elifanayo leengcaphephe liye lithengisa ngenxa yokuba ayinaki ukuqonda iinjongo.
Ukumboza zonke iinkalo: Kukho izibhengezo ezibanzi zezifundo ezibandakanyiweyo kwiimviwo kwaye ungazikwazi konke. Uvumelekile ukuba uzalise njengomlawuli wenkqubo ixesha elide kodwa, i-Red Hat eqinisekisiweyo yoMphathi weeNkqubo ucela ngaphezulu. Umlawuli ugxininisa kwinani lezabelo kwaye angenakho amandla kwimimandla engaphandle kwayo. Ngethuba uceba ukuhlolwa, kufuna i-push ukuba ihlanganise nganye yee themes kwaye uqonde ukuphucula kwangoku.
Into ebaluleke kakhulu kukuba ukuhlolwa akulula nje njengoko ucinga. Izabelo zikunqanda ukuba wenze iimpazamo zangempela ezicela ukufunda okupheleleyo kunye neziphumo. Ngaloo ndlela, xho mekeke kumgangatho oqhelekileyo wokuqinisekisa ukuba awuyi kubeka umgama phakathi kwesi sifundo.